Iminyaka eyishumi yokulwa nemiphumela yokushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IPlanethi enguMhlaba njengoba sazi namuhla ngumhlaba lapho umthelela womuntu emvelweni mkhulu kakhulu kangangokuba sikwazile ukwephula ibhalansi yemvelo yekhaya lethu. Manje, ngokusho kocwaningo olwenziwe yi-International Institute for Applied Analysis Systems (IIASA) sineminyaka eyishumi kuphela ukulwa nemiphumela yokushisa komhlaba, ngaleyo ndlela kugwenywa ukuthi izinga lokushisa elijwayelekile likhuphuka ngaphezu kuka-2ºC.
Uma singenzi lutho, imiphumela ingaba engalindelekile.
Ngokwesifundo, ngamafutha ezinto ezimbiwa phansi angama-2100 kufanele anikeze kuphela amaphesenti angama-25 wamandla okudingwa yimboni. Namuhla umnotho womhlaba uncike kuma-95% alo mandla. Lokhu kusho ukuthi uma singaqali ukusebenzisa futhi sisebenzise amandla avuselelekayo amaningi, ahlanzeke kakhudlwana, sizogcina sesihlala kwiplanethi efudumele kakhulu. Ukuze ucacise, cishe ukufudumala okungu-3,5ºC.
UMichael Obersteine, ongumbhali ngokubambisana ocwaningweni, ukusho lokho kufanele kuthathwe izinyathelo zokunciphisa ukukhishwa kwe-carbon dioxide okubangelwa imisebenzi yabantu kuze kube zero ngo-2040, ngaphandle kwalokho asikwazanga ukugcina izinga lokushisa lingaphansi kuka-2ºC.
I-IIASA incoma ukuthi wonke umuntu azi ukuthi kubaluleke kangakanani unakekele umhlaba nemvelo ukuze kuthi ekupheleni kwaleli khulu leminyaka ukukhishwa kwekhabhoni kwehle kuye kumaphesenti angama-42, okuzosebenza kakhulu ekuqedeni imiphumela yokufudumala kwembulunga yonke. Yize kunjalo, wengeze wathi lesi simo sibi kangangokuba noma ngabe kuthathwa izinyathelo zokuvikela imvelo, amazinga okushisa ngo-2100 azokwenyuka ngo-2,5ºC.
Mhlawumbe sekuyisikhathi sokucabanga ngalokho ebesikwenza kuze kube manje, nokuthi yini esisenaso isikhathi sokwenza.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Iminyaka eyishumi yokulwa nemiphumela yokushisa komhlaba